स्व राजा बिरेन्द्रलाई सम्झदै भक्कानो छोडेर किन रोइन गायिका कोमल ओली ? (भिडियोसहित) – Complete Nepali News Portal
स्व राजा बिरेन्द्रलाई सम्झदै भक्कानो छोडेर किन रोइन गायिका कोमल ओली ? (भिडियोसहित)
August 11, 2017	1,430 Views
चर्चित गायिका कोमल ओली स्व राजा बिरेन्द्र शाहको परिवारलाई सम्झिदै भक्कानिएर रोइन । जेठ १९ राजा बिरेन्द्रको हत्या भएको दिनको सम्झनामा नारायणहिटी संग्रहालय पुगेकी गायिका ओली संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिने क्रममा भक्कनिएकी हुन् ।
विरेन्द्र मृत्युसँगै देशले अशल अभिभाबक गुमाएको उनले बताइन । सानैदेखि दरबारसँग नजिक रहेकी गायिका ओलीलाई राजा बिरेन्द्रले कक्षा ४ देखि ग्रयाजुएसनसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरेका थिए । दरवार हत्याकाण्डका बेला ओली नेपाल बाहिर थिइन् ।